Afaka mampiasa GPS ve ny mpampiasa hanarahana ny mpiasa? | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Tracker GPS manokana ho an'ny zokiolona, ​​ankizy, biby fiompy, fiara - Chain Key, Watches, Pendants sns
Whatsapp: Singapore +65 8333-4466, Jakarta +62 81293-415255 (51 Ubi Ave 1 # 05-07A Level 7, S408933 - Misokatra: Mon-Sat: 10 am-6pm)
Fakan-tsary miafina miafina
Afaka mampiasa GPS ny mpampiasa an-tsehatra hanarato mpiasa?
Mandroso isan'andro isan'andro izao tontolo izao. Afaka mahita zava-baovao vaovao maro noforonina isan'andro isika. Amin'io isa io, ny lehilahy dia hiditra amin'ny vanim-potoana vaovao feno fiasa sy fitaovana manaitra. Ao amin'ity ranomasimbe maoderina noforonina maoderina ity ary misy famoronana siansa antsoina hoe GPS. Koa inona ny GPS? Andao hodinihintsika haingana ny famerenana izany, ary handinika bebe kokoa momba izany isika.
Inona ny GPS Tracking System?
Ny GPS dia mijoro ho an'ny "Global Positioning System". Ny GPS Tracking System dia misy fitaovana entina mandefa finday ahafahan'ny olona manara-maso sy manara-maso ny toerana misy azy ireo eo noho eo. Ny tena zava-dehibe ao ambadik'izany dia ny satelita eny amin'ny habakabaka izay ampiasaina hanondroana ny toerana misy ny olona. Na aiza na aiza toerana misy anao, GPS dia hilaza aminao ny toerana misy anao. Amin'ny ankapobeny, ny GPS Tracking System dia ampiasaina mba hahitana toerana. Very teny an-dalana? Tsisy olana! GPS dia hanome ny toerana marina indrindra izay misy anao amin'izao fotoana izao ary hitarika anao any amin'izay halehanao koa. Andao isika hanana ny fomba fiasan'ny GPS Tracking System.
Ampiasaina ny GPS Tracking System:
GPS dia famoronana siansa avo lenta. Manamora ny fiainantsika izany ary manana fampiharana maro. Raha ny tokony ho izy, dia manana fiasa hitadiavana sy hitadiavana fiara, olona, ​​biby fiompy na fananana rehetra. Azo ampiasaina hikajy ny elanelana sy ny hafainganana ihany koa. Na izany aza, ny tena zava-dehibe ataontsika eto dia ny hoe afaka mampiasa ve ny mpampiasa mba hitily ny mpiasa? Ity no fanontaniana eto. Andao hojerentsika izany.
Afaka manara-maso ny mpiasany ve ny mpampiasa? Raha hitantsika amin'ny fomba fijery ankapobeny izany, dia afaka manara-maso mora foana ny mpiasa ny mpampiasa ary tsy ho sahirana amin'ny fanaovana izany izy ireo. Misy fomba vitsivitsy azo anaovana izany. Azon'izy ireo atao ny manara-maso ny fiarany. Misy fomba maro hafa ahafahan'ny mpampiasa manara-maso ny mpiasa. Fa raha hitantsika izany avy amin'ny fomba fijery hafa izay milaza hoe: "Mety amin'ny mpampiasa ve ny manara-maso ny mpiasa ao aminy?". Amin`ity tranga ity, misy fitsipika vitsivitsy tokony hokarakaraina. Ny mpampiasa dia manana ny zony hanara-maso ny mpiasa, fa amin'ny ora fiasany. Nefa ankoatry ny ora fiasana, tsy tokony hitazomana ny mpiasa ao aminy satria fihetsika ratsy sy maloto izany.
Ahoana ny fomba anara-maso ny mpiasa?
Hitantsika fa manana fomba maro hanaraha-maso sy hanaraha-maso ny mpiasany ny mpampiasa. Na izany aza, nanangona fomba fototra vitsivitsy izay tena mahazatra izahay. Andao hojerentsika ny azy:
Fanaraha-maso ny fiara:
Ny fomba lehibe indrindra an'ny mpampiasa manara-maso sy manara-maso ny mpiasa ao aminy dia ny fanaraha-maso ny fiarany. Azontsika atao ny mahita fitaovana fanaraha-maso azo itokisana marobe amin'ny tsena izay azo ampiasaina amin'ny fanarenana fiara. Ireo fitaovana fanaraha-maso ireo dia mifamatotra amin'ny ampahany rehetra amin'ny fiaran'ny mpiasa ary ny ambiny dia aorian'ny fitaovana. Izy io dia ho hitazom-pahombiazana ireo mpiasa. Noho izany, ny fomba lehibe indrindra hitadiavantsika ny lasan'ny mpiasa dia ny fanarahana ny fiarany. Saingy misy lesoka hafa koa. Matetika ny mpiasa dia mampiasa ny fiarany amin'ny asany. Fa io dia voafetra amin'ny arabe ihany. Raha ny fiara napetraka eo amin'ilay toerana, dia tsy afaka hiteny hoe aiza ny mpiasa lasa. Mety nandeha tamin'ny toerana hafa izy tamin'io toerana io. Noho izany, tsy afaka manana toerana marina misy ireo mpiasa izahay amin'ity fomba ity.
Ity dia fomba iray hafa hanarahana maso sy hanaraha-maso ireo mpiasa. SmartPhones dia fitaovana mahazatra eto amin'ity tontolo ity. Afaka hitantsika saika ny tsirairay ary ny tsirairay ankehitriny dia manana smartphone na farafaharatsiny finday. Ny finday dia novolavolaina tamin'ny fomba iray izay manohana ny GPS Tracking manontolo andro ao amin'izy ireo ho an'ny mpampiasa. Ity rafitra ity dia azon'ny mpampiasa ampiasaina hanarahana ny mpiasan'izy ireo. Ny fitaovan'ny mpiasa dia hampifandraisina amin'ny fitaovan'ny mpiasa ary hamela ny mpampiasa hanara-maso tsy tapaka ny mpiasany. Tsy hiteraka olana toy ny amin'ny fiara io. Satria mazava fa tsy azo avela na aiza na aiza ny telefaona finday na tsy mifanalavitra amin'ny mpampiasa matetika izy ireo. Noho izany, ny fomba tsara indrindra ahitantsika ny fanarahan-dia ireo mpiasa dia amin'ny alàlan'ny Tracking Smart Phone. Na izany aza, ny fanarahana dia tsy maintsy misy lalàna ihany koa. Amin'ny ora fiasana ihany no mila anaovana azy. Raha tsy izany dia lasa fihetsika tsy ara-dalàna ho an'ny mpampiasa izany.
Fitsipika momba ny fanaraha-maso ny mpiasa:
Raha ny fahitan'ireo mpiasa amina mpampiasa azy dia misy ny fitsipika sy torolàlana tokony hotadidina sy arahana. Tena saropady loatra ny fahalalana fa miasa ny mpiasanao ary manome vokatra tsara ihany koa ny varotra ny orinasa. Koa raha ny marina, izany rehetra izany dia miankina amin'ny mpampiasa sy ny fomba fampiasany ny rafitra fanaraha-maso.
Andao hojerentsika ny fitsipika manan-danja sasany izay tokony hiheveran'ny mpampiasa azy:
Famoronana politika voasoratra:
Tokony hamolavola ny politikam-piasa mifototra amin'ny fomba fanao tsara ho an'ny fikarohan'ny mpiasa GPS ny orinasa, ary tsy maintsy terena ny olona manaraka azy. Avy eo ny mpampiasa na ny lehiben'ny orinasa dia tokony hanao politika amin'ny alàlan'ny faneken'ny mpiasa tsirairay. Ny fitsipika dia tokony atolotra eo anoloan'ny mpiasa tsirairay ary tsy maintsy omena azy ireo malalaka izy ireo hanome ny heviny malalaka momba ny politika ataon'ny orinasa. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia afaka manara-maso ireo mpiasa ao aminy. Tsy maintsy ataon'izy ireo ny mandinika ireo torolàlana farafahakeliny isan-taona mba hiantohana ny fanaraha-maso ny GPS manohana ny orinasan'izy ireo amin'ny fomba mahasoa ary maneho ny fiovan'ny lalàna rehetra.
Fanaraha-maso sy ny lalàna:
Amin'izao lafiny fanaraha-maso sy fanaraha-maso izao dia tena manana andraikitra lehibe ny governemanta. Amin'ny fotoanan'ny famoahana azy, ny lalàna federaly no mamaritra izay azon'ny governemanta atao ary tsy vitan'izy ireo atao amin'ny fanaraha-maso GPS, saingy vitsy ny lalàna manakana ny orinasa tsy hanara-maso ny mpiasa amin'ny GPS. Amin'ny lafiny iray kosa, ireo fanjakana dia manana sombiny amin'ny lalàna momba ny tsiambaratelo izay mametra ny fanaraha-maso.
12034 Total Views 1 Views Today
Raha toa ka tokony hampiasa GPS ny mpitandrina ny fanaraha-maso ny mpiasa
Ahoana ny fomba fiasan'ny Global Positioning System (GPS)…
Ahoana ny fomba hanarahana ny vadinao / vadinao mamitaka…
mailaka: sales@omg-solutions.com na
Fenoy ny fangatahana fanamafisana ary hiverina any aminareo izahay ao anatin'ny 2 Hrs
Ampidiro ny e-mailanao: *
Fanamafisana mailaka: *
NKF - Andro fisorohana ny fahalavoana
Paya Ubi Industrial Park, 51 Ubi Ave 1 # 05-07A Dingana 7,
Birao Indoneziana (Jakarta)
OMG GPS manara-maso ny fampiharana finday dia manova ny Android, iOS, na Windows fitaovana amin'ny GPS mandeha amin'ny fitaovana. Ny fametrahana ity app ity amin'ny fitaovana tianao hotadiavina, afaka manara-maso ny toerana misy azy ao amin'ity tranonkala ity ianao. Ampiasao ireto dingana manaraka ireto hanombohana ny fanaraha-maso ny fianakavianao (Kids / Elderly Parent), namana, mpiara-miasa, fananana orinasa.
Copyright 2011, OMG Consulting Pte Ltd novolavolain'i	OMG Consulting Pte Ltd